sodium hydroxide Foomka amooniyamka; Foomka Amooniyam; Cusbada 'ammonium cusbada' biyaha ammonia Foomka sodium; Cusbada sodium ee loo yaqaan 'formic acid'
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta NaOH + HCOONH4 → H2O + NH3 + HCOONa
Waa maxay xaaladda falcelinta ee NaOH (sodium hydroxide) waxay la falgashaa HCOONH4 (Formic acid ammonium; Ammonium formate; Formic acid ammonium salt)?
Sidee fal-celintu u dhici kartaa oo u soo saari kartaa H2O (biyaha) iyo NH3 (ammonia) iyo HCOONa (Sodium formate; Formic acid sodium salt)?
HCOONH4 ayaa la falgala NaOH
Dhacdada ka dib NaOH (sodium hydroxide) waxay la falgashaa HCOONH4 (Formic acid ammonium; Ammonium formate; Formic acid ammonium salt)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada NaOH + HCOONH4 → H2O + NH3 + HCOONa
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee H2O (Formic acid ammonium; Ammonium formate; Formic acid ammonium salt)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh H2O (biyaha) badeecad ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee NH3 (Formic acid ammonium; Ammonium formate; Formic acid ammonium salt)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh NH3 (ammonia) alaab ahaan?
Su'aalaha la xidhiidha badeecada HCOONa (Sodium formate, Formic acid sodium salt)
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee HCOONa (Formic acid ammonium; Ammonium formate; Formic acid ammonium salt)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh HCOONa (Sodium formate; Formic acid sodium salt) alaab ahaan?
NaOH + NH4HSO3 → H2O + NH3 + NAHSO3
sodium hydroxide Amooniyam hydrogen sulfite; Sulfurous acid hydrogen ammonium cusbo biyaha ammonia
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta NaOH + NH4HSO3 → H2O + NH3 + NAHSO3
Waa maxay xaaladda falcelinta ee NaOH (sodium hydroxide) ee NH4HSO3 (Ammonium hydrogen sulfite; Sulfurous acid hydrogen ammonium salt)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa H2O (biyaha) iyo NH3 (ammonia) iyo NaHSO3 () ?
NH4HSO3 ayaa la falgala NaOH
Dhacdada ka dib NaOH (sodium hydroxide) waxay la falgashaa NH4HSO3 (Ammonium hydrogen sulfite; Sulfurous acid hydrogen ammonium salt)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada NaOH + NH4HSO3 → H2O + NH3 + NAHSO3
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee NH3 (Ammonium hydrogen sulfite, Sulfurous acid hydrogen ammonium salt)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh NH3 (ammonia) alaab ahaan?
Su'aalaha la xidhiidha alaabta NaHSO3 ()
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee NaHSO3 (Ammonium hydrogen sulfite, Sulfurous acid hydrogen ammonium salt)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh NaHSO3 () badeecad ahaan?
amooniyam sulfate sodium hydroxide biyaha sulfate sodium ammonia
(digo yara) (lng) (rnn) (kh)
(trung) (trung) (xoog leh) (trung) (xoog leh)
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta (NH4)2SO4 + 2NaOH → 2H2O + Na2SO4 + 2NH3
Waa maxay xaaladda falcelinta (NH4) 2SO4 (ammonium sulfate) oo la falgala NaOH (sodium hydroxide)?
NH (NH4) 2SO4 ayaa la falgala NaOH
Dhacdada ka dib (NH4) 2SO4 (ammonium sulfate) waxay la falgashaa NaOH (sodium hydroxide)
Xalka ku urursan milixda amonia waxay ku falcelisaa xalka alkaline-ka marka la gubayo, sii deynta gaaska amonia
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada (NH4)2SO4 + 2NaOH → 2H2O + Na2SO4 + 2NH3
(rnn) (rnn) (kt) (lng) (kh) (digo yara)
(xoog leh) (Trang BAC) (xoog leh) (xoog leh)
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta C6H12O6 + 2 [Ag (NH3)2]OH → 2Ag + H2O + 3NH3 + CH2OH (CHOH)4COONH4
Sidee falcelintu u dhici kartaa oo u soo saari kartaa Ag (silver) iyo H2O (biyaha) iyo NH3 (ammonia) iyo CH2OH (CHOH) 4COONH4 ()?
Lacag Bixinta: Gali 1 ml oo ah xalka AgNO3: 1% tuubo tijaabo ah oo nadiif ah, ka dibna ku rid dhibco ah xalka NH3: 5% oo si fiican u rux ilaa ay roobku gebi ahaanba isku milo. Ku dar 1 ml oo ah xalka gulukooska, waxyar kululee tubbada. Darbiga tuubada tijaabada lakabka muraayadda qalinka ayaa ka muuqda.
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada C6H12O6 + 2 [Ag (NH3)2]OH → 2Ag + H2O + 3NH3 + CH2OH (CHOH)4COONH4
Su'aalaha la xidhiidha alaabta CH2OH(CHOH)4COONH4 ()
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee CH2OH(CHOH)4COONH4 ()? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh CH2OH(CHOH)4COONH4 () badeecad ahaan?